Vaovao - Inona no boaty fitsaboana plastika
Inona ny boaty fitsaboana plastika
Ny boaty fitsaboana plastika (antsoina koa hoe boaty fitsaboana) na boaty fitsaboana plastika, dia be mpampiasa any amin'ny hopitaly sy ny fianakaviana. Ny azo ampiasaina amin'ny fitehirizana zava-mahadomelina, fitaovana ara-pahasalamana na hitondrana azy ireo hahitana marary.
Ny boaty fitsaboana, araka ny anarany, dia fitoeran-javatra fitahirizana fanafody sy fitaovam-pitsaboana, izay azo avoaka ary ampiasaina raha sendra tranga iray. Raha ampitahaina amin'ny kitapo fitsaboana, ny boaty fitsaboana dia manana habe sy habe lehibe kokoa, izay mety mitahiry entana maro kokoa. Tsy afaka mitahiry entana vonjy maika raha tsy ampiasaina indray mandeha ny fitaovana fitsaboana. Tsy mitovy ny boaty fitsaboana satria mitahiry entana betsaka kokoa noho ny habeny.
Fanasokajiana boaty fitsaboana plastika
Fanasokajiana amin'ny fampiasana
1. boaty fitsaboana amin'ny fianakaviana
2.Ny dokotera mitondra kitapo fitsaboana azy manokana
3. Kitapo fanampiana voalohany
4. boaty fitehirizana zava-mahadomelina ao amin'ny hopitaly
5. boaty fitsaboana mahomby
6. boaty fitsaboana Desktop
7.Comprehensive dia mampiasa boaty fitsaboana
8. boaty fitsaboana automatique
Fanasokajiana araka ny fomba sy ny firafiny
1. boaty fitsaboana tsotra
2. boaty fitsaboana marobe
3. boaty fitsaboana Multidrawer
4. boaty fitsaboana fanamafisana
5. boaty fitehirizana fanafody lehibe
Boaty fitsaboana fianakaviana Kit vonjy taitra voalohany
Mitondra kit fitsaboana manokana ny dokotera
Boaty fitsaboana Multidrawer & Multichamber
Boaty fitsaboana tsotra
Boaty fitsaboana manan-tsaina boaty fitsaboana automatique
Boaty fitsaboana Desktop
Mampiasa boaty ara-pitsaboana feno
Boaty fitehirizana zava-mahadomelina any amin'ny hopitaly
Inona avy ireo fitaovana plastika ampiasaina hanamboarana ampahany amin'ny boaty fitsaboana?
Any amin'ny hopitaly, ny departemanta na karazana fanafody sy fitaovana ampiasaina amin'ny fanafody dia matetika ampidirina amina fonosana manokana na maromaro.
Ity karazana fanafody feno ity dia raikitra sy voasokajy. Antsoina hoe boaty fitsaboana izy io.
Afa-tsy ilay boaty ara-pitsaboana ampiasaina any amin'ny sahan'ady na mari-pana avo lenta ary tontolo iainana avo lenta, ny ankamaroan'ny boaty fitsaboana hafa dia vita amin'ny famolavolana plastika. Ohatra: boaty fitsaboana hopitaly, boaty fitsaboana ao an-trano, boaty fitsaboana vonjy taitra sns.
Ny fitaovana plastika ampiasaintsika amin'ny fanaovana boaty fitsaboana dia PP, ABS, PC.
Boaty fitsaboana PP dia manasongadina: fahaiza-manao lehibe, lanja maivana, vidin'ny famokarana ambany be dia be, afaka mandray ny fitehirizana zava-mahadomelina isan-karazany, ny hamandoana, ny anti-lakroa. Izy io dia mety amin'ny fitehirizana zava-mahadomelina ao an-tokantrano sy hopitaly.
Araka ny filan'ny fampiasana azy, ny faritra plastika na vy hafa dia ampiasaina mba hifanaraka amin'ireo ampahan'ny boaty PP hanamafisana na hanome fiasa bebe kokoa amin'ilay boaty.
Raha ny filazan'ny mpampiasa, ny tontolo iainana sy ny fitehirizana zava-mahadomelina na fitaovam-pitsaboana, ny boaty fanafody dia manana fomba, habe ary firafitra anatiny.
Inona avy ireo faritra plastika ao anaty boaty fitsaboana?
Ny boaty fanafody izay misy ampahany plastika dia misy ireto faritra plastika manaraka ireto
2. Vatan'ny boaty
3. Fantsona anatiny, boaty vatasarihana
Teknolojia fanorenan-tsindrona sy torohevitra momba ny singa boaty fitsaboana plastika
1. Amin'ny ankapobeny, kely ny haben'ny boaty fitsaboana tsotra, ary tsotra ny firafiny. Ny fonony ambony, ny vatan'ny boaty ary ny faritra anatiny amin'ny ankapobeny dia azo atao amin'ny plastika PP.
2. Ho an'ny faritra ivelany amin'ny boaty fitsaboana multifunctional miaraka amina rafitra sarotra, matetika ampiasaina ny fitaovana ABS sy PC misy habeny milamina.
3. Ny ampahany vy vita amin'ny aliminioma dia ampiana indraindray hanamafisana ny sisiny sy ny zoro boaty fanafody izay matetika mila hafindra.
4. Somary lehibe ny halalin'ny boaty fitsaboana, ary tsy ampy ny fanamafisana ao anaty boaty. Ilaina ny fitaovana ABS na PC.
5. Ireo fitaovana ampiasaina dia tsy maintsy manome fahafaham-po ny ROHS na FDA. Ny fitehirizana sy ny fampiasana akora dia tokony hiavaka amin'ny fitaovana hafa.
6. Ny milina fanindronana sy ny tontolon'ny famokarana dia tokony hadio sy milamina mifanaraka amin'ny fenitra.
Kit ny fitsaboana dia manana tsena malalaka, ny famokarany dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fenitry ny indostria. Orinasa Mestech dia manao lasitra plastika sy famokarana ho an'ny boaty fitsaboana plastika.Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Fotoana fandefasana: Oktobra-15-2020